China Best Price 5*6/7*5/6*6 ရေစိုခံရာသီဥတု Strip Door Seals ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |JYD
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း 5*6/7*5/6*6 ရေစိုခံရာသီဥတုဒဏ်ခံ တံခါးရွက်ဖျံများ
JYD သည် အနှစ် 20 လုံး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ကြိုးများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးပြုပါသည်။သုံးခုမြောက် နည်းပညာ အပြောင်းအလဲ ပြီးသွားပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ အခမဲ့နမူနာများ
ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများအနီးရှိ ကွဲအက်မှုများနှင့် ကွက်လပ်များသည် သင့်အိမ်အတွင်းသို့ အကြမ်းများဝင်လာစေပြီး အပူနှင့် အအေးပေးစရိတ်များ မြင့်မားစေသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ Weatherstrip Seals များကို လေအေးပေးစက်မှထွက်ပေါက်နှင့် ပြင်ပလေများဝင်ရောက်နိုင်စေမည့် ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများကြားရှိကွက်လပ်များကို ပိတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပူနွေးသောလများအတွင်း မလိုလားအပ်သောဖုန်မှုန့်များ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့် ဝတ်မှုန်များကို ဖယ်ရှားရာတွင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။၎င်းတို့သည် ဟောင်းနွမ်းနေသော သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းနေသော တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်များကို အစားထိုးကာ ပြင်ပလေကို ဆန့်ကျင်သည့် အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် အစားထိုးရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1. ရေစိုခံခြင်း၊ အသံ ကာရံခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ နွေးထွေးခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားကာကွယ်ခြင်း၊
2. ထုတ်ကုန်၏အဓိကဂုဏ်သတ္တိများမှာ- အဆိပ်အတောက်မရှိသော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်များဖြစ်သည်။နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
6-8 ကီလိုဂရမ် / တစ်လိပ်
5*6/6*6/7*5/7*6 စသည်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို လက်ခံပါ။
မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အဖြူ၊ အညို
Item Package အရေအတွက်
200-500 မီတာ/လိပ်၊4လိပ်/ပုံး
၎င်းကို ပလပ်စတစ်စတီးတံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ၊ အလူမီနီယံသတ္တုစပ်တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ၊ သစ်သားတံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များနှင့် အခြားဗိသုကာအလှဆင်တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
မေး- သင်က ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ ဒါမှမဟုတ် ထုတ်လုပ်သူလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Q: မင်းရဲ့ပေးပို့ချိန်က ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် 5-10 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ စတော့တွင် ရှိနေပါသည်။သို့မဟုတ် 15-20 ရက်အတွင်း ပစ္စည်းမရှိပါက အရေအတွက်အလိုက် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q: နမူနာပေးပါသလား။အခမဲ့လား ဒါမှမဟုတ် အပိုပါလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ အခမဲ့ပါ။
Q: အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုအာမခံနိုင်မလဲ။
A: အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု။အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့ပါက ကုန်ပစ္စည်းများ အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ရန်ပုံငွေများကို ပြန်ပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ထုတ်ကုန်များကို SGS၊ ISO9001 မှအတည်ပြုသည်။
မေး- ငါလိုချင်တာမတွေ့ဘူး၊ မင်းငါ့ကို OEM ပေးနိုင်လား။အနိမ့်ဆုံး မှာယူမှုပမာဏကရော ဘယ်လိုလဲ။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း 20 ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကြီးမားသောညစာစားပွဲကို ရရှိနိုင်သော်လည်း သေးငယ်သောအမှာစာများကို ဘယ်တော့မှ ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိပါ၊ MOQ သည် 5000 မီတာရှိနိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- စက္ကူပုံးဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပလပ်စတစ်အိတ်ဖြင့် ကြိတ်စက်ဖြင့်ထုပ်ပိုးပြီးနောက် ပုံးထဲတွင်ထည့်ပါ။
4 လိပ်/ပုံး၊ 250 မီတာ/လိပ်
ဆိပ်ကမ်း-SHENZHEN SHANGHAI GUANGZHOU
တစ်ထုပ်အရွယ်အစား- 54*28*42 စင်တီမီတာ
တစ်ခုတည်းစုစုပေါင်းအလေးချိန်: 5-8 ကီလိုဂရမ်
ယခင်- တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သူ အလူမီနီယမ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါး ရာသီဥတုဒဏ်ခံ
နောက်တစ်ခု: JYD စက်ရုံစျေးနှုန်း ပြတင်းပေါက်နှင့် ဗီရိုအတွင်း ကပ်ခွာဖျံများ ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချိန်နှင့်အမျှ ပေးပို့နိုင်သော စက်ရုံလေးခုရှိသည်။
2. အွန်လိုင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။
1. တပ်ဆင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များ။
2. silicified မဟုတ်သောရာသီဥတုချွတ်ချွတ်ထုပ်ပိုးခြင်းမရှိဘဲ 1-3 နှစ်နှင့်ထုပ်ပိုးပြီးနောက် 1 နှစ်;
ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုဘဲ silicified weather strip ၏ သက်တမ်းသည် ၃-၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး ထုပ်ပိုးပြီးနောက် ၂ နှစ်ဖြစ်သည်။
3. သင့်မေးခွန်းကို2နာရီအတွင်း အဖြေပေးပါမည်။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် 5-10 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ စတော့တွင် ရှိနေပါသည်။သို့မဟုတ် 15-20 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ စတော့တွင်မရှိပါက အရေအတွက်အလိုက် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
A: အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု။အရည်အသွေး ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံလာရင်၊
ကုန်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် သင့်ရန်ပုံငွေများကို ပြန်ပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ထုတ်ကုန်များကို SGS၊ ISO9001 မှအတည်ပြုသည်။
အပြင်ပန်းတံခါး Weatherstripping အမျိုးအစားများ
Wool Pile မိုးဒဏ်ခံခြင်း။
5*9mm ဖြောင့်အမျိုးအစား မီးခိုးရောင် ဘရပ်ရှ် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စတ...
6*6 မီလီမီတာ ဆူညံသံ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု
စျေးသက်သာသော Wool Pile Weather Strip သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည်။
ရာသီဥတုအမြှေးပါး အမျိုးမျိုးအတွက် နမူနာများ
7*8 pile weather strips တံဆိပ်ခတ်ထားသော strips များ
D အတွက် စက်ရုံ လက်ကား သိုးမွှေး Pile Weather Strip...